Brushstrokes yeiyo iPhone yenguva yemberi kubva paruoko rwe LG Innotek | IPhone nhau
Brushstrokes yeiyo iPhone yenguva yemberi kubva muruoko rwe LG Innotek
Isu tiri kurwa zuva nezuva nerunyerekupe rweiyo iPhone 8 kana iPhone 10th yekuyeuka uye isu tatoona pane imwe nguva zvingangoita ruzivo rwechizvarwa chinotevera cheiyi iPhone nyowani. Zvinotaridza kushamisa kutaura nezve iPhone iri kure chaizvo asi zvakajairika vagadziri vanotevera yavo nzira uye mune ino Apple haina kuponeswa kubva pairi.
Ok, ini ndinogovana newe kuti zvanyanyisa kukurumidza kutaura nezve inofungidzirwa iPhone 9 isu patinenge tisina mhando nyowani yeiyo iPhone 7s, 7s Plus, 8 kana chero chavanoda kuchidaidza, asi zvakajairika kuti zvimwe zvinoenderana data reizvi uye nezvimwe zvakaburitswa kana iri inobata nechomukati chinhu chakakosha sebhodhi reamai. Mune ino kesi zvingave LG Innotek inoona nezvekuvandudzwa kwemamaboardboard anochinjika yezvinhu zvinotevera nekuwedzera iyo iPhone.
Nguva dzose nemakumbo edu pasi uye tichiona kuti ramangwana rekambani richidarika nemaPhones ayo achazoburitswa munaGunyana, runyerekupe nezvezvizvarwa zvinotevera zveApple mureza hazvipere uye panotova nekutaura nezve kutanga kwehuwandu hwekugadzirwa kwemabhodhi emaamai eiyo inotevera iPhone 2018 modhi, mamwe mamaboardboard ayo anoenderera mberi achigadzirwa neLG, achivhura Samsung pachayo semutengesi mukuru wezvinhu zvemukati.
Mune ino kesi, vamwe vezvenhau vane hunyanzvi vanosvika pakufunga kuti iyo yakakombama skrini iyo yaitaurwa nezvayo yakawanda yaifanira kuisa iyi iPhone 2017, haigone kuiswa nekuda kwedambudziko neiyo mamaboardboard eiyo iPhone. Kana ichokwadi aya makuhwa anouya kunetiweki kubva kwakasiyana zvinoreva, iyo inotevera iPhone modhi inogona kunge yatove neyakavezwa skrini sekunge ivo vaine iyo Samsung mamodheru. Chimwe chinhu ndechekushandisa iyo ino skrini inogona kuve neinopfuura iyo inoshamisa aesthetics iyo iyo yaunopa chishandiso. Pane nzira refu yekuenda ya2018, saka ticha tarisa pane mamodheru avanofanira kupa gore rino tobva taenderera mberi neya2018.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Brushstrokes yeiyo iPhone yenguva yemberi kubva muruoko rwe LG Innotek
Kunyange 8 GB ye RAM haina kukodzera iyo OnePlus 5 kuyera kusvika kune iyo iPhone 7
Unoda kudzikisira kubva kuIOS 11 beta kuenda kuIOS 10? Tinokuratidza maitiro ekuzviita